Guddoomiye Kuxigeenka Aqalka Sare: Wasaaradda Waxbarashadu qatar kuma noqon karto mustaqbalka ardayga Puntland – Kalfadhi
Guddoomiye Kuxigeenka Aqalka Sare: Wasaaradda Waxbarashadu qatar kuma noqon karto mustaqbalka ardayga Puntland
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Aqalka Sare, Abshir Maxamed Axmad (Bukhaari), ayaa difaacay go’aanka ay Puntland ku gaartay in aysan Imtixaanka Federaalka ee ay Wasaaradda Waxbarashadu diyaasrisay gelin ardayda dugsiyada sare ee Puntland sanadkaan ka qalin-jabineysa.
“Dastuurka Federaalka ayaa xaq u siinaya Puntland in ay si madaxbannaan u maamulato nidaamkeeda waxbarasho” ayuu Guddoomiye Abshir ku yiri ciwaanka dhigaal uu ku soo daabacay Feysbuuggiisa shalay.
Waxa uu sheegay in ay tahay qodob dastuuriya in ay Puntland si gaara u maareysan karto waxbarashadeeda. Hadal uu Wasiirka Waxbarashada, Cabdullaahi Goodax Barre, ku yiri in ay mustaqablka ardayga Puntland dhib ku tahay inuusan gelin Imtixaanka Wasaaraddiisa ayuu Guddoomiye Abshir sheegay inuu kasoo horjeeddo dastuurka.
“Sax ma ahan in wasiirku ku goodiyo in Wasaarada Waxabarashada ee heer Federal ay halis ku noqon karto mustaqbalka ardeyda Puntland” ayuu yiri Abshir Bukhaari. Waxa uu Wasiir Goodax ku booriyey inuu arrimaha waxbarashada dalka u raaco sida uu qabo dastuurka “ oo ah” buu yiri “wada-xaajood iyo iskaashi”.
Waxa uu Guddoomiyuhu sidoo kale ku baaqay in, inta ay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ka gaarayaan heshiis, ay Wasaaradda Waxbarashadu ka fogaato adeegsashada siyaasado aan laheyn sal sharci ah oo waxyeello gaarsiin kara Nidaamka Federaalka, sida uu hadalka u dhigay.
“Qodobka 54-aad (ee Dastuurka) wuxuu xeerinayaa marka laga reebo awoodda Arrimaha Dibadda, Difaaca Qaranka, Jinsiyadda & Socdaalka & Siyaasadda Lacagta, oo ay awooddeeda iyo xilkeeda yeelaneyso Dowladda Federaalka, in wixii ka soo hara ee awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale ay wada xaajood u furan yihiin” ayuu Abshir Bukhaari ku yiri dhigaalkiisa.
“Haddaba, arrinta tacliinta dalka waxa ay ka mid tahay arrimaha ay si gaar ah u maareysan karaan Dowlad Goboleedyada amaba uu wadaxaajoodku ka furan yahay sida ku cad Qodobka 52-aad ee Dastuurka ee Wasiirka Waxbarashadu go’aan kuma laha maareynta Waxbarashada Puntland” ayaa, sidoo kale, ka mid ahayd dhigmada Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Abshir Maxamed Axmad (Bukhaari).